Maxay Kenya ku soo kordhin kartaa booqashada marwada madaxweyne Trump? - BBC News Somali
Maxay Kenya ku soo kordhin kartaa booqashada marwada madaxweyne Trump?
Marwada koobaad ee waddanka Mareykanka, Melania Trump, ayaa waxa ay dalka Kenya ku soo gaartay booqashadii ay ku maraysay afarta dal ee Afrikaanka ah.
Dhanka kale Melania Trump ayaa markii labaad la kulmi doonta dhigeeda marwada koobaad ee dalka Kenya. Waxa ayna Margaret Kenyatta ku amaantay ololeheeda ay ugu magacdartay "Beyond Zero" kaas oo lagu hormarinayo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka.
Melania oo seeygeeda kala safatay LeBron James
Xaaska madaxweynaha Maraykanka oo qalliin gashay
Marwada u dhaxda Donald Trump ayaa iyadana la imanaysa ololeheeda loogu magacdaray ''Be Best'' kaas oo lagu doonayo in lagu hormariyo nolosha caruurta.